Waa maxay qaaxadu – somali
Qaaxadu waa cudurada faafa. Waxa sababa bakteeria loo yaqaan Mycobacterium tuberculosis. Qaaxada waxa ay u kala gudubtaa dadka tiiyo hawada raacaysa. Qaxadu inta badan waxa ay waxa yeeshaa sambabada, halkaas oo bakteriadu ku korto kuna badato caabuqna sababto. Halkaas oo bakteria uga sii faafto qaybaha kale ee jidhka tiiyo raacaysa dhiiga iyo dheecaanka lymfaatiga. Sidaas Awgeed xanuunka qaaxadu waxa uu u gudbi karaa qanjidhada, lafaha, kaadi mareenka, xubnaha tarranka. Maskaxda, jidhka ama jidhka oo dhan gaadha. Qaaxadu waa cudur la daawayn karo, baadhitaanka iyo daawaynta qaaxadu waa lacag la’aan ayay u tahay bukaanka.
Qaaxadu waa xanuun weli ka jira qaybo badan oo dunida ah. Sanadkii waxa u bukooda ilaa 9 milian oo dada qaaxada iyo 1.5 milian oo u dhimata xanuunka. Qaaxadu waxa ay u badantay khaas ahaan wadmada daqaala hoogu hooseeyo ama uu dhexdhexaadka yahay. Xaalad nololeedka ay saxamadu badantay, nafaqodarada, Cudura HIV oo sareeya iyo adeega caafimaad oo hooseeya ayaa Kordhin kara faadida cudurka. Qaaxadu waxa ay ku fidaa sidoo kale wadamada ay aafooyinka dabiiciga ah, dagaaldu iyo burbur mujtamac ay dumiyeen adeegyada bulshada.
Finland, Cudurka qaaxadu wuxu weli aha sanadihii 1930dii mashkilada dhinaca caafimaadka bulshada. Waqtiyadaas waxa cudurka qaaxada u dhimanjiray saacd kasta qof reer Finland ah. Waqtigan aynu joogno waxa la helaa 300 oo xaaladood oo cudurka qaaxada ah sanadkiiba. Sedex daloolkiiba hal kuwaas ka mida waa dad u dhashay wadamo ajaaniba. Kooxda ugu badan ee halista ugu jirta in ay qaadaan xanuuka qaaxada waxa ka mida, soogalaytida ka yimaada wadamada qaaxadu ku badantay iyo dadka isticmaala khamriga iyo daroogada.
Cudurka qaaxadu waa xanuun weli jira waana cudur u baahan in aan la dhayalsan.